News - အနာဂတ်တွင်သယ်ဆောင်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ချက်။
Conveyor သည်ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အဓိကလည်ပတ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တတိယပါတီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပစ္စည်းနှင့်နည်းပညာအခြေခံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ပစ္စည်းအခြေခံသယ်ဆောင်သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတိုးတက်နှင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများတွင်လူအများအပြား၏အလုပ်သမားအင်အားကိုများစွာလျော့ကျစေသည်၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
အနာဂတ်တွင်သယ်ဆောင်စက်သည်အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာကိုတိုးချဲ့ရန်၊ အလိုအလျောက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊
၁ ။ အကြီးစားသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, ကြီးမားသောတစ်ခုတည်းစက်အရှည်နှင့်ကြီးမားသောသယ်ဆောင်ထောင့်တို့ပါဝင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်သယ်ဆောင်သည့်ကိရိယာ၏အရှည်မှာ ၄၄၀ ကီလိုမီတာကျော်ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောခါးပတ်သယ်ဆောင်အရှည်သည် ၁၅ ကီလိုမီတာနီးပါးရှိပြီး၊ ပါတီ A နှင့်ပါတီ B. ကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်အစုအဝေးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော“ ခါးပတ်သယ်ယူလမ်းမကြီး” ရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံများစွာသည်အကွာအဝေးများစွာနှင့်အဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အအုံကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်။
2. ပေါ်ကို၏လျှောက်လွှာနယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ တဖြည်းဖြည်းစားခြင်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်း၊ မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများပေါ်ထွန်းခြင်းသည်အပူ၊ ပေါက်ကွဲလွယ်သော၊
၃။ ပို့စက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်စက်တစ်ခုတည်းအတွက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်မှုစနစ်၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စာတိုက်ကဒ်များကိုအလိုအလျောက်အမျိုးအစားခွဲရန်အတွက်သုံးတဲ့ trolley conveyor သည်အရေးယူခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာနယ်ပယ်၌ဆေးသုတေသနအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကုန်ကြမ်းတစ်တန်လျှင် ၁ ကီလိုမီတာ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ပေါ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။